Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Maamulka Juventus Oo Sugaya Go'anka Cristiano Ronaldo, Dalabka Manchester United Ee Jadon Sancho Oo La Aqbalay Dhanka Iyo Qodobo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga: Maamulka Juventus oo sugaya go’anka Cristiano Ronaldo, Dalabka Manchester United ee Jadon Sancho oo la aqbalay dhanka iyo Qodobo kale
Wararka Suuqa kala iibsiga: Maamulka Juventus oo sugaya go’anka Cristiano Ronaldo, Dalabka Manchester United ee Jadon Sancho oo la aqbalay dhanka iyo Qodobo kale
June 30, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka ayaa xiiseynaya Juventus ka dib dadaalkiisii ​​Man of the Match ee Euro 2020 ee Switzerland sida ay qortay Calciomercato
Chelsea iyo Real Madrid ayaa xiiseynaya daafaca bidix ee kooxda Roma Leonardo Spinazzola, sida laga soo xigtay Il Messaggero.
Didier Deschamps ayaa sii ahaan doona tababaraha xulka France inkasta oo ay si lama filaan ah uga baxeen Euro 2020, sidaas waxaa qortay ESPN .
Juventus oo sugeysa go’anka iyo mustaqbalka Cristiano Ronaldo hadii uu doorto in uu boxo waxay qorsheenayaan in ay u dhaqaaqaan badalkiisa, sida ay qortay Tuttosport.
Konrad de la Fuente ayaa Marseille kaga soo biiray Barcelona aduun dhan 3 milyan oo euro sida ay xaqiijiyeen kooxaha.
Arsenal iyo Emile Smith Rowe ayaa lagu soo waramayaa inay durba heshiis ‘afka ah’ ka gaareen heshiis cusub oo uu wiilkaan ugu sii joogayo garoonka Emirates. CBS Sports
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuusan wax dhibaato ah ku qabin inuu diro Gabriel Jesus si uu sare ugu qaado fursada ay kooxdiisu ku heli karto Harry Kane . Sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport
Atletico Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Saul Niguez inuu xor u yahay inuu ka tago kooxda haddii dalab ku habboon uu yimaado. Sida ay qortay AS
Daafaca Arsenal William Saliba ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu la fariisto kooxda oo uu wadahadalo kala yeesho kooxda mustaqbalkiisa. Sida ay qortay football.london
Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay aqbasho dalab seddexaad oo ah (85m (£ 73m) oo ka yimid Manchester United oo ku aadan weeraryahanka Jadon Sancho . Sida uu sheegayo weriyaha SPORT1 Patrick Berger
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay horumar ka sameyneyso dadaalka ay ugu jirto saxiixa Albert Sambi Lokonga ka dib markii ay heshiis shaqsi ah la gaareen ciyaaryahanka Anderlecht . Fabrizio Romano
AC Milan ayaa lagu soo waramayaa in loo soo bandhigay fursad ay kula wareegi karaan xidiga Barcelona Philippe Coutinho iyo kan Everton James Rodriguez . sida ay qortay Tuttosport
Aston Villa ayaa weli isha ku heysa weeraryahanka Chelsea Tammy Abraham, sida ay qortay Eurosport.
Bayern Munich ayaan dooneynin inay iibiso Kingsley Coman waxayna dajindoontaa qiimaha ay ku dooneyso oo ah 100 milyan euro (£ 86m / $ 119m), sida ay qortay Sky Deutschland.
Barcelona ayaa raadineysa inay hesho koox Premier League ah oo iibsataPhilippe Coutinho, sida ay qortay Mundo Deportivo.
Arsenal ayaa, sida laga soo xigtay The Star , u dhaqaaqi doonta goolhayaha Sheffield United Aaron Ramsdale ka dib Euro 2020.
Milan ayaa ka go’an inay dhameystirto heshiis kordhinta amaahda ee ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Brahim Diaz – sida laga soo xigtay AS .
Juan Cuadrado ayaa qarka u saaran inuu qandaraaska u kordhiyo Juventus – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Halyeeyga Arsenal iyo xulka France Patrick Vieira ayaa lagu wadaa in loo magacaabo macalinka cusub ee kooxda Crystal Palace – sida laga soo xigtay The Athletic .